के गर्‍यो एनआरएनले ? - Naya Patrika
के गर्‍यो एनआरएनले ?
विभिन्न कारणले आफ्नो परिवारको छाक टार्न र पेट पाल्न बिदेसिन बाध्य नेपालीको एउटा पनि छाता संगठन थिएन । ०४६ मा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि खाडी तथा मध्यपूर्वमा नेपाली कामदारको माग ह्वात्तै बढ्न थाल्यो । अध्ययन, तालिम र सेमिनारको अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालीहरू भाग लिन पुगे । कोही अध्ययन र तालिम सकेर उतै बसे, कोही देश फर्के । खकति नेपाली विदेशमा छन् र कुन–कुन देशमा छन्, कसैलाई हेक्का थिएन । नेपालीहरू विदेशमा गएर नाम र दाम कमाएका छन् भन्थे मानिसहरू । सन् २००३ को अक्टोबरमा भएको पहिलो सम्मेलनमा कुनै रौनक थिएन । मान्छेमा विश्वास थिएन । सो विश्व सम्मेलनमा ३२ देशबाट जम्मा २ सय २८ को उपस्थिति थियो । अझ सम्मेलनपछिको घोषणापत्र झन् कतिपयले राम्रोसँग बुझ्दै बुझेनन् किनकि त्यो अंग्रेजीमा लेखिएको ६ बुँदे घोषणापत्र थियो ।
घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै ‘विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपालीलाई भावनात्मक एकता गर्दै सञ्जाल विस्तार गर्र्ने’ त्यसैगरी दोस्रो बुँदामा नेपालमा ‘हाइड्रो, ट्राभल एन्ड टुरिज्म र प्रविधि’ क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने भनेबाट एक छत्र रूपमा नेपाली उपभोक्तामाथि राज गरेको त्यस वेलाको दूरसञ्चार संस्थानको एकाधिकारलाई निजी क्षेत्रमा आएको ‘युटिएल र मेरो मोइबाइल’ ले तोडेको थियो । जसमध्ये एकमा तत्कालीन अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोको लगानी थियो ।
सन् २००५ अक्टोबर ९ मा भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो । काठमाडौंमा सम्पन्न सो सम्मेलनमा १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सय मिलियनको ‘एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड’को अवधारणा सार्वजनिक ग¥यो । एनआरएनको पाँचौँ सम्मेलनबाट अध्यक्ष चुनिएका जीवा लामिछानेको कार्यकालसम्म आइपुग्दा यसै फन्डका माध्यमबाट नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भित्रिएको हो । विशाल भ्रातृत्वको भावना विकसित गर्दै नेपाली एकतालाई मजबुत बनाउने अभिप्रायले एनआरएनमार्फत एक अभियानको सुरुवात गरिएको हो । सन् २०१५ सम्म आइपुग्दा संघको विश्व सम्मेलनमा ५२ देशबाट एक हजार एक सय ९१ को सहभागिता रहन पुग्यो । अब हुने विश्व सम्मेलनमा १५ सयभन्दा बढीको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ ।
यही अक्टोबरको १४–१७ काठमाडाैँमा हुने महासम्मेलनमा अहिले उम्मेदवारको वर्षा व्यापक छ । संघमा यतिविधि चाहना हुनु भनेको संघको गरिमा र साख उच्च हुनु नै हो । तर, यहाँ प्रसंग न संघको इतिहासको हो, न उम्मेदवारको । यी डेढ दशकका अवधिमा संघद्वारा के–कति कार्य भएनन् होइन कि के–कति कार्य भए भन्नेबाट विश्लेषण हुनु जरुरी छ । मुख्यतया अहिले एनआरएनको सञ्जाल ७७ देशमा जोडिएको हामीलाई थाहा भयो । तर, आँकलनमा ११० भन्दा बढी देशमा नेपालीको बसोवास छ भन्ने अनुमान छ ।
वर्तमान परिप्रेक्षमा अध्यक्ष शेष घले र उनकी श्रीमती जमुना घलेद्वारा ‘एमआइटी फाउन्डेसन’घोषणा गरी एक अर्बको अक्षयकोष स्थापना गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउ“दै आइएको छ । पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले सामूहिक लगानीको अवधारणा अघि सार्दै सय मेगावाटको जलविद्युत् निकाल्ने परियोजना अघि सारेका हुन् । उनीद्वारा स्थापना गरिएको एनआरएनको लगानी रहेको सानिमा हाइड्रोले विभिन्न परियोजनासँग सम्झौता गर्दै अहिलेसम्म ५६ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने सम्झौता गरिसकेको छ । करिब एक अर्बको लमजुङ दर्दिखोला जलविद्युत् परियोजना त्यसैको नमुना हो ।
पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचनले जिसिआई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दै जापानी प्रविधिबाट अर्गानिक मल, बिउबिजन उत्पादन गरेका छन् । सो कम्पनीले अर्गानिक गुदपाक र च्याउसमेत उत्पादन गर्छ । उनले देशभरि अर्गानिक मल प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने अभियान छेडेका छन् । गोरखाको लाप्राकमा भूकम्पपीडितका लागि ६ सय १२ वटा आवास बस्ती बनाउने योजनामा तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । बा“की चार सय घर संघले अन्य जिल्लामा बनाउने लक्ष्य लिएको छ । अध्यक्ष घलेको ८ अर्ब लगानीमा काठमाडौंमा सेराटन होटेल खुल्दै छ, जसमा २२५ वटा रुम हुनेछन् । प्रत्यक्ष रूपले चार सय ५० जनाले रोजगारी पाउनेछन् । यो आफैँमा गर्वको विषय हो ।
वैदेशिक रोजगार राहत कोषमा नेपाल सरकार र संघका तर्फबाट गरी १० करोड राहत कोष स्थापना गरिएको छ । पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेको पहलमा नेदरल्यान्डको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा बुद्धमूर्ति स्थापना आफैँमा कल्पनाबाहिरको कुरा हो, त्यो सम्भव भएको छ । परोपकारी क्षेत्रमा सानातिना छुटफुट सहयोग त कति भए, तर करिब एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढी सहयोग भएको अनुमानित छ । अन्य जिल्लामा भूकम्पपीडित, बाढीपहिरो, दैवीप्रकोप आदिमा भएको सहयोगको डाटै छैन ।
हालसम्म राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सात अर्बभन्दा बढीको वार्षिक राजस्व भित्रिएको देखाउँछ र यसैका आधारमा औसत नेपालीको आयस्तर बढेको देखिन्छ । यसैगरी आर्थिक पत्रकार संघ (सेजन)को प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै एनआरएनको १० अर्बभन्दा बढी लगानी देखिन्छ । सन् ०१४ सम्मको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने २९ अर्ब ८५ करोड ५० लाखको लगानी भएको देखिन्छ, जसमा दुई हजार चार सय ७३ जनाले एनआरएनको लगानीद्वारा रोजगारी पाएका छन् । तर, यो संस्थागत रूपमा सतहमा देखिएको मात्र हो, अदृश्य रूपले एनआरएनको व्यक्तिगत लगानी अनुमानित ६० अर्बभन्दा बढी भएको एनआरएनकै जानकार बताउँछन् ।
यद्यपि स्थापनाको १० वर्षपश्चात् नेपाल सरकारबाट संघले मान्यता पाएको हो । अलिकति जोखिम नलिने खालका मानिसलाई लगानी गर्न विगतमा एकातिर वातावरण थिएन, अर्कोतिर स्थायी सरकार, स्थानीय तहको चुनाव र संविधान बनेको थिएन । सन् ०१३ पछि नै लगानीका लागि अलि उदार हुन पुगेको हो । वैदेशिक रोजगारमा ससानो पुँजी भएका मानिस पनि अहिले प्रोत्साहित भएका छन्, देशमै केही गर्नुपर्छ भनेर । यसका अलावा वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि पाँच लाखको बिमाको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, एनआरएनकै पहलमा १० लाखसम्म बनाइएको छ । साथै एनआरएनका अगुवा डा. उपेन्द्र महतोद्वारा ललितपुरको भैंसेपाटीमा हजार करोडको लागतमा ३० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको ७५० शय्याको ‘मेडसिटी हस्पिटल’ निर्माण भइरहेको छ ।
यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा एनआरएनको लगानीमा पाँच र बाहिर पाँच गरी १० अस्पताल बनाइने लक्ष्य रहेको छ । उनीबाट फूलकुमारी ट्रस्ट, पशुपति वृद्धाश्रम, किरियापुत्री भवनलगायत धेरै परोपकारी काम भइरहेका छन् । यसैगरी नेपालमा विज्ञहरू भित्र्याउन नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानस“ग सम्झौता गरी नेपालका खास हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका जडीबुटी र वैकल्पिक ऊर्जाको सोधखोज, अन्वेषण गर्ने अख्तियार तय भएको छ ।
यो त केवल बिदेसिएका पहिलो पुस्ता हुन् । हामी आफैँमा आर्थिक रूपमा अक्षम नै छौँ । विदेशमा लगानी गर्ने चिनियाँ नागरिकलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सुविधा दिलाउने चीन सरकारको सहुलियत छ । भारतको अहिले पाँच पुस्ता भइसकेका छन् बिदेसिएका । यी देशका नागरिकसँग पनि हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो परिस्थितिमा विदेशमा सफल हुनु चानचुने विषय भने होइन । तर पनि यो सामूहिक अवधारणा, सामूहिक अभियान हो । एकल व्यक्तिले लगानी गरेर देश बन्दैन । त्यसैले गैरआवासीय नेपाली संघले के गरेन भन्दा पनि के गर्‍यो भन्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
(लेखक बेल्जियम निवासी गैरआवासीय नेपाली हुन्)